रबी लामीछानेले सार्वजनिक रुपमै मन्त्रीलाई झण्डा मात्रै हलाएर हिँड्ने भन्दै यसरी सातो लिए (भिडियो सहित) - SudurSanchar
तपाईंले के गर्नुभयो भन्दै रबीमाथी जंगिएका मन्त्री रामवीर मानन्धरलाई रबीले मन्त्रीप्रती आक्रोशित हुँदै भने, ‘मैले १०३ ओटा सिलिन्डर ल्याएँ तपाईंले एउटा पनि सिलिन्डर ल्याउनुभयो ? एउटा सिलिन्डर ल्याएर दिनु छैन झण्डा हल्लाएर हिंड्ने” भन्दै मन्त्रीकै अगाडि थर्काए रबी लामिछानेले।
तपाईंले के गर्नुभयो भन्दै रबीमाथी जंगिएका मन्त्री रामवीर मानन्धरलाई रबीले मन्त्रीप्रती आक्रोशित हुँदै भने,”मैले १०३ ओटा सिलिन्डर ल्याएँ तपाईंले एउटा पनि सिलिन्डर ल्याउनुभयो ? एउटा सिलिन्डर ल्याएर दिनु छैन झण्डा हल्लाएर हिंड्ने” भन्दै मन्त्रीकै अगाडि थर्काए रबी लामिछानेले। रबीले ठाडै आक्रोशका साथ भन्नुभयो,”मैले के गरेँ भन्नुभयो नि ? मैले १०३ ओटा सिलिन्डर ल्याएँ,तपाईंले के गर्नुभयो ? एउटा सिलिन्डर ल्याएर दिनुहोस् न।
एउटा सिलिन्डर ल्याउन नसक्ने झण्डा हल्लाएर हिँड्ने भन्दै सातो लिए।त्यसपछि रबीलाई फेस गर्न नसकी मन्त्री मानन्धर आफ्नो सुरक्षाकर्मीलाई जाउँ भन्दै तर्केर बाटो लागे। रबीको यो आक्रोशलाई अहिले सामाजिक संजालमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूले ‘स्याबास रबी जि’ भन्दै गर्वले खुसी र प्रशंसा पनि व्यक्त गरिरहेका छन्।